Menabe sy Atsimo Andrefana: mitondra ny fanampiany ny Sinoa ho an’ny famatsian-drano | NewsMada
Menabe sy Atsimo Andrefana: mitondra ny fanampiany ny Sinoa ho an’ny famatsian-drano
Mamaly hatrany ny hetahetan’ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana sinoa. Iaraha-mahalala ny fahasahiranan’ny mponina any amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe fa mbola betsaka ny tsy mahazo rano. Mitondra vahaolana amin’izany ny governemanta sinoa.
Nanambara, omaly, tany Morondava ny ambasadaoron’i Sina, Rtoa Yang Xiaorong fa hitondra vahaolana amin’ny famatsian-drano ho fanampiana ny mponina any Menabe sy Atsimo Andrefana. Miisa 200 ny lavadrano hatao amin’io tetikasa io any amin’ireo faritra roa ireo, handaniana 4,17 tapitrisa dolara. Mponina roa hetsy mahery ny hahita tombontsoa avy amin’izany. Tanjona ny hanamora ny fahazoan’ireo mponina ireo famatsian-drano madio hahatsara ny fari-piainan’izy ireo, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamana.
Ankinina amin’ny China Jiangxi International Economic sy ny Technical Cooperation ny fanatanterahana ny tetikasa, miaraka amin’ny minisiteran’ny Rano. Ampy traikefa amin’ny fitrandrahana lavadrano sy ny fanadiovana ny rano ireo orinasa roa ireo, antenaina hanampy betsaka ny mponina any an-toerana.
Ny taona 2013, efa nisy fanamboarana lavadrano any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsimo Atsinanana, niatrehana ny haintany sy ny fanampiana ny mponina hahazo famatsian-drano. Fanampiana tsy averina nomen’ny governemanta sinoa tamin’io tetikasa io, fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta.
Mijery akaiky ny tokony hanampiana an’i Madagasikara
Mijery akaiky hatrany ny tokony hanampiana an’i Madagasikara ny firenena sinoa, indrindra any atsimon’ny Nosy. Hita izany eo amin’ny fanaovana fotodrafitrasa, fahasalamana, fampianarana, sns. Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, ohatra, efa hatramin’ny taona 1975, isan-taona, tsy mitsahatra mandefa mpitsabo any Ambovombe Androy ny fitondrana sinoa, mitsabo ny mponina any an-toerana sy manofana ireo mpiasan’ny fahasalamana.
Amin’ireny vokatry ny loza voajanahary ireny, faritra maro ianjadian’ny fahasahiranana, hanehoan’ny vahoaka sinoa ny firaisankinany amin’ny vahoaka malagasy. Efatra tapitrisa dolara koa ny nomen’ny Sinoa niampy vary 4.300 t, ny taona 2017, raha tratran’ny haintany ny any Atsimo, niampy ny fandalovan’ny rivodoza Enawo.